Isamba esidayisa yonke impahla Vaping Taxes in the United States and Around the World ifektri abakhiqizi | OKUSHA
Njengoba i-vaping ikhula ekuthandeni, iba yisisulu semvelo kohulumeni abadinga imali yentela. Ngenxa yokuthi imikhiqizo yomhwamuko ivame ukuthengwa ababhemayo nababhemayo, abaphathi bezentela bacabanga ngokufanele ukuthi imali esetshenziswe ku-e-cigarettes yimali engasetshenziswanga kubakhiqizi bakagwayi bendabuko. Ohulumeni bathembele kusikilidi neminye imikhiqizo kagwayi njengomthombo wemali amashumi eminyaka.
Ukuthi amadivayisi avuthayo ne-e-liquid afanele ukukhokhiswa intela efana nogwayi cishe sekuseceleni kwephuzu. Ohulumeni bababona bexosha ababhemayo kude nogwayi, futhi bayakuqonda ukuthi imali elahlekile kumele yenziwe. Njengoba ukuvutha kufana nokubhema, futhi kunokuphikisana okukhulu nempilo yomphakathi ekuqhumeni, kuba yinto ekhangayo kosopolitiki, ikakhulukazi ngoba bangaxhasa intela ngezimangalo eziningi zezempilo ezingabazekayo.
Izintela zeVape manje sezihlongozwa futhi zidluliselwa njalo e-United States nakwezinye izindawo. Izintela zivame ukuphikiswa ngabameli bokuncishiswa kokulimala kukagwayi kanye nabamele amaqembu ezokuhweba embonini evuthayo kanye nabathengi abavuthayo, futhi bavame ukuxhaswa yizinhlangano ezilawula ugwayi njengezinhlangano zamaphaphu nezinhliziyo.
Kungani ohulumeni bayikhokha intela imikhiqizo ekhuphukayo?
Intela yemikhiqizo ethile — evame ukubizwa ngokuthi intela yezimpahla — isetshenziswa ngezizathu ezahlukahlukene: ukukhuphula imali yeziphathimandla zentela, ukushintsha indlela yokuziphatha kwalabo abakhokhiswayo, nokususa izindleko zezemvelo, ezokwelapha nezengqalasizinda ezidalwe ukusetshenziswa kwemikhiqizo. Izibonelo zifaka intela yotshwala ukuze kunqandwe ukuphuza ngokweqile, nentela kaphethiloli ukukhokhela ukunakekelwa komgwaqo.
Sekuyisikhathi eside imikhiqizo kagwayi ihlose intela yezimpahla. Ngenxa yokuthi ukulimala kokubhema kubeka izindleko kuwo wonke umphakathi (ukunakekelwa kwezokwelapha kwababhemayo), abasekeli bezintela zikagwayi bathi abathengi bakagwayi kufanele bawukhokhe lowo mthetho. Kwesinye isikhathi intela yentela yotshwala noma kagwayi ibizwa ngokuthi intela yesono, ngoba ijezisa futhi nokuziphatha kwabaphuzayo nababhemayo — futhi ngombono kusiza ukukholisa izoni ukuthi ziyeke izindlela zazo ezimbi.
Kepha ngoba uhulumeni uncika emalini engenayo, uma ukubhema kwehla kunenkinga yezezimali okumele yenziwe ngomunye umthombo wemali engenayo, noma kungenjalo uhulumeni kufanele anciphise ukusetshenziswa kwemali. Kohulumeni abaningi, intela kagwayi ingumthombo obalulekile wemali engenayo, futhi imali ekhokhiswayo ikhokhiswa ngaphezu kwentela ejwayelekile yokuthengisa ehlolwe kuyo yonke imikhiqizo ethengisiwe.
Uma umkhiqizo omusha uncintisana nogwayi, abenzi bomthetho abaningi bafuna ngokukhipha intela umkhiqizo omusha ngokulinganayo ukwenza imali elahlekile. Kepha kuthiwani uma umkhiqizo omusha (ake siwubize ngokuthi yi-e-cigarettes) unganciphisa umonakalo odalwa ukubhema nezindleko zempilo ezihambisanayo? Lokho kushiya izishayamthetho zididekile — okungenani yizo ezikhathaza ukuzifunda.
Imvamisa abenzi bezomthetho bakahulumeni bahlukaniswa phakathi kokuxhasa amabhizinisi endawo njengezitolo ze-vape (abangafuni intela) nokujabulisa ama-lobbyists amaqembu ahlonishwayo njenge-American Cancer Society kanye ne-American Lung Association (exhasa intela njalo kwimikhiqizo yomhwamuko). Kwesinye isikhathi into enqumayo ulwazi olungelona iqiniso mayelana nokulimazeka okucatshangelwayo kokuqhuma. Kepha kwesinye isikhathi badinga imali nje.
Isebenza kanjani intela ye-vape? Ingabe ziyefana yonke indawo?
Abathengi abaningi base-US bakhokha intela yokuthengisa kahulumeni emikhiqizweni evuthayo abayithengayo, ngakho-ke ohulumeni (futhi kwesinye isikhathi basekhaya) sebevele bazuze ekuthengisweni kwe-vape ngisho nangaphambi kokuba intela yempahla ihlanganiswe. Izintela zentengiso zivame ukuhlolwa njengephesenti lentengo yokuthengisa yemikhiqizo ethengiwe. Kwamanye amazwe amaningi, abathengi bakhokha i- “value added tax” (VAT) esebenza ngendlela efanayo neyentela yokuthengisa. Ngokuqondene nezintela zentela, ziza nezinhlobo ezimbalwa eziyisisekelo:
Intela yokuthengisa ku-e-liquid - Lokhu kungahlolwa kuphela kuketshezi oluqukethe i-nicotine (ngakho-ke empeleni kuyintela ye-nicotine), noma kuwo wonke ama-e-liquid. Njengoba ihlolwe njalo ngemililitha, lolu hlobo lwentela ye-e-juice luthinta abathengisi be-e-liquid yamabhodlela ngaphezu kwabathengisi bemikhiqizo eqediwe equkethe inani elincane le-e-liquid (njengama-pod vapes kanye nama-cigalikes). Isibonelo, abathengi be-JUUL bazokhokha kuphela intela ku-0.7 mL we-e-liquid nge-pod ngayinye (noma ama-mL amathathu kuphela ngephakethe ngalinye lama-pods). Ngoba imboni kagwayi ekhiqiza imikhiqizo ingamadivayisi amancane asuselwa kuma-pod noma ama-cigalikes, ama-lobbyists ajwayele ukufuna intela yemililitha ngayinye
Intela yesitolo esidayisa yonke impahla - Lolu hlobo lwentela ye-e-cigarette lukhokhwa ngokusobala ngumthengisi (umthengisi) noma umthengisi kuhulumeni, kepha izindleko zihlala zidluliselwa kumthengi ngendlela yamanani aphezulu. Lolu hlobo lwentela luhlolwa ngezindleko zomkhiqizo umthengisi akhokhiswa lona uma uthenga kumthengisi. Imvamisa umbuso ubeka ama-vapes njengemikhiqizo kagwayi (noma "eminye imikhiqizo kagwayi," efaka nogwayi ongenantuthu) ngenhloso yokuhlola intela. Intela yesamba sonke ingahlolwa kuphela kumikhiqizo equkethe i-nicotine, noma ingasebenza kuwo wonke ama-e-liquid, noma kuyo yonke imikhiqizo kufaka phakathi amadivayisi angenayo i-e-liquid. Izibonelo zifaka phakathi iCalifornia nePennsylvania.I-California vape tax iyintela ephelele ebekwa minyaka yonke nguhulumeni futhi ilingana nesilinganiso esihlanganisiwe sayo yonke intela kagwayi. Kusebenza kuphela kumikhiqizo equkethe i-nicotine. Intela yasePennsylvania ye-vape tax yayisebenza kuyo yonke imikhiqizo, kufaka phakathi amadivayisi nezinsiza ezingafaki i-e-liquid noma i-nicotine, kepha inkantolo yanquma ngo-2018 ukuthi umbuso awukwazi ukuqoqa intela kumadivayisi angenayo i-nicotine.
Kwesinye isikhathi le ntela yempahla ihambisana "nentela yaphansi," evumela umbuso ukuthi uqoqe intela kuyo yonke imikhiqizo isitolo noma i-wholesaler esesandleni ngosuku intela eqala ukusebenza ngalo. Imvamisa, umthengisi wenza i-inventory ngalolo suku futhi abhale isheke kuhulumeni ukuthola inani eligcwele. Ukube isitolo sasePennsylvania besinokuthengiselana okungabiza u- $ 50,000 esandleni lapho kusungulwa impahla, umnikazi ubezoba nesibopho sokukhokha ngokushesha okungama- $ 20,000 kuhulumeni. Kumabhizinisi amancane angenayo imali eningi esandleni, intela yaphansi uqobo ingasongela impilo. Intela ye-PA vape yaxosha izitolo ezingaphezu kuka-100 ngaphandle kwezamabhizinisi ngonyaka wokuqala.
Ukuthola intela e-United States
Ayikho intela yenhlangano emikhiqizweni evukayo. Imithethosivivinywa yethulwe kwiCongress ngentela yentela, kepha akukho noyedwa oye evotweni leNdlu ephelele noma iSenate okwamanje.
Izwe lase-US, indawo, nezintela zendawo
Ngaphambi kuka-2019, izifundazwe eziyisishiyagalolunye kanye ne-District of Columbia bathela intela imikhiqizo evuthayo. Lelo nani liphindaphindwe kabili ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zika-2019, lapho ukwesaba kokuziphatha nge-JUUL nentsha eqothukayo ebibambe izihloko zezindaba cishe nsuku zonke isikhathi esingaphezu konyaka kwaphoqa abomthetho ukuthi benze okuthile "ukunqanda ubhadane."
Njengamanje, uhhafu wamazwe ase-US unohlobo oluthile lwentela yomkhiqizo evuthayo ezweni lonke. Ngokwengeziwe, amadolobha nezifunda kwezinye izifundazwe zinentela yazo ye-vape, njengoba kunjalo nangesiFunda saseColumbia nasePuerto Rico.
Ngenkathi i-Alaska ingenayo intela yombuso, ezinye izindawo zikamasipala zinezintela zazo ze-vape:
IJuneau Borough, i-NW Arctic Borough nePetersburg zinezintela ezifanayo ezingama-45% emikhiqizweni equkethe i-nicotine
IMatanuska-Susitna Borough ine-55% yentela ephelele
Intela yaseCalifornia "yeminye imikhiqizo kagwayi" isethwa minyaka yonke yiBhodi yezwe Lokulingana. Ikhombisa iphesenti layo yonke intela ehlolwe kusikilidi. Ekuqaleni lokhu bekulinganiselwa ku-27% wezindleko ezidayiswayo, kepha ngemuva kokuthi Isiphakamiso 56 sikhuphule intela kagwayi isuka ku- $ 0.87 yaya ku- $ 2.87 iphakethe, intela ye-vape inyuke kakhulu. Ngonyaka oqala ngoJulayi 1, 2020, intela ingama-56.93% wezindleko ezidayiswayo zayo yonke imikhiqizo equkethe i-nicotine
Umbuso unentela enezinhlangothi ezimbili, uhlola u- $ 0.40 ngemililitha ku-e-liquid emikhiqizweni evaliwe (ama-pods, ama-cartridges, ama-cigalikes), kanye ne-10% wholesale kwimikhiqizo evulekile, kufaka phakathi i-e-liquid yamabhodlela namadivayisi
Intela engu- $ 0.05 ngemililitha ngayinye ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Inhlokodolobha yesizwe ibeka ama-vapes “njengeminye imikhiqizo kagwayi,” futhi ihlola intela emananini asezingeni eliphakeme ngokuya ngesilinganiso esikhonjiswe entengweni yonke kagwayi. Ngonyaka wezimali wamanje, ophela ngoSepthemba 2020, intela isethwe kuma-91% wezindleko ezidayiswayo zamadivayisi kanye ne-e-liquid equkethe i-nicotine
Intela engu- $ 0.05 ngemililitha ngayinye ku-e-liquid emikhiqizweni evaliwe (ama-pods, ama-cartridges, ama-cigalikes), kanye no-7% wentela ephelele kuma-open-system devices ne-e-liquid yamabhodlela kuzoqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 2021.
Intela engu-15% wholesale kuyo yonke imikhiqizo evukayo. Ngaphezu kwentela yezwe lonke, bobabili iCook County nedolobha laseChicago (eliseCook County) banezintela zabo ze-vape:
IChicago ihlola u- $ 0.80 ngentela ngayinye yebhodlela kuketshezi oluqukethe i-nicotine kanye ne- $ 0.55 ngemililitha. (I-vapers yaseChicago kufanele futhi ikhokhe imali engu- $ 0.20 nge-mL Cook County tax.) Ngenxa yentela eyeqile, izitolo eziningi ze-vape eChicago zithengisa i-zero-nicotine e-liquid kanye nama-shots e-DIY nicotine ukugwema intela ephezulu ye-mL enkulu amabhodlela
Imikhiqizo yentela yaseCook County equkethe i-nicotine ngesilinganiso esingu- $ 0.20 ngemililitha ngayinye
Intela engu- $ 0.05 ngemililitha kuyo yonke i-e-liquid, noma ngaphandle kwe-nicotine
Intela engu-15% ethengiswayo kuma-e-liquid asebenza ngamabhodlela nangamadivayisi avulekile, kanye ne- $ 1.50 ngentela yeyunithi ngayinye kuma-pods namakhadibhodi
Intela ephelele engu-43% kuyo yonke imikhiqizo evuthayo
Ayikho intela ye-vape ezweni lonke eMaldin, kodwa isifunda esisodwa sinentela:
Isifunda saseMontgomery sibeka intela engama-30% kuyo yonke imikhiqizo evuthayo, kufaka phakathi amadivayisi athengiswa ngaphandle ketshezi
Intela ephelele engu-75% kuyo yonke imikhiqizo evuthayo. Umthetho udinga ukuthi abathengi bakhiphe ubufakazi bokuthi imikhiqizo yabo evuthayo ikhokhisiwe intela, noma babhekene nokushaqwa nenhlawulo ka- $ 5,000 ngecala lokuqala, kanye no- $ 25,000 ngamacala angeziwe
Ngo-2011 iMinnesota yaba yisifundazwe sokuqala ukukhokhisa intela kuma-e-cigarettes. Intela ekuqaleni yayingu-70% wezindleko ezidayiswayo, kodwa yanyuswa ngo-2013 yaya kuma-95% wempahla enkulu kunoma yimuphi umkhiqizo oqukethe i-nicotine. Ama-cigarikes nama-pod vapes — ngisho namakhithi okuqala afaka ibhodlela le-e-liquid — akhokhiswa intela kuma-95% enani lawo lonke, kodwa kuma-e-liquid asemabhodleleni kuphela intela eyi-nicotine uqobo
Intela engu-30% wholesale kuyo yonke imikhiqizo yomhwamuko
Intela engu-8% emikhiqizweni evulekile yesistimu evulekile, kanye no- $ 0.30 ngemililitha emikhiqizweni evaliwe (ama-pods, ama-cartridges, ama-cigalikes)
Intela yaseNew Jersey i-e-liquid ku- $ 0.10 ngemililitha emikhiqizweni esekwe ku-pod- kanye ne-cartridge, i-10% yentengo yokuthengisa ye-e-liquid yamabhodlela, kanye ne-30% wholesale yamadivayisi. Izishayamthetho zaseNew Jersey zavota ngoJanuwari 2020 ukuyiphinda kabili intela e-liquid enezitezi ezimbili, kepha umthetho omusha wavotelwa ngumbusi uPhil Murphy
INew Mexico inentela e-liquid enezinhlangothi ezimbili: 12.5% ​​we-wholesale kuketshezi olusemabhodleleni, kanye ne- $ 0.50 kudoti ngayinye, igobolondo, noma ugwayi onamandla angaphansi kwamamililitha ayi-5
Intela yokuthengisa engama-20% kuyo yonke imikhiqizo yomhwamuko
Intela engu- $ 0.10 ngemililitha ngayinye ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Mhlawumbe intela ye-vape eyaziwa kakhulu ezweni intela yase-Pennsylania engu-40%. Ekuqaleni kwahlolwa kuyo yonke imikhiqizo yomhwamuko, kepha inkantolo yanquma ngo-2018 ukuthi intela ingasetshenziswa kuphela ku-e-liquid nakumadivayisi afaka phakathi i-e-liquid. Intela yomhwamuko i-PA ivimbe amabhizinisi amancane angaphezu kuka-100 kuhulumeni ngonyaka wokuqala ngemuva kokuvunywa kwawo
Intela engu- $ 0.05 nge-milliliter ku-e-liquid kanye ne- $ 3.00 ngentela iyunithi kuma-e-cigarettes
Intela ephelele engu-56% kuma-e-liquid nakwizisetshenziswa ezigcwalisiwe
Intela engu-92% kwi-e-liquid nakumadivayisi — intela ephakeme kakhulu ebekwe yinoma imuphi umbuso
Intela engu- $ 0.066 ngemililitha ngayinye ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Umbuso udlulise intela enezitezi ezimbili yokuthengisa nge-e-liquid ngo-2019. Ukhokhisa abathengi u- $ 0.27 ngemililitha ku-e-juice — ene-nicotine noma engenayo — kuma-pods nakuma-cartridges amancane kuno-5 mL ngosayizi, ne- $ 0.09 ngemililitha ngayinye kuketshezi ezitsheni kukhulu kuno-5 mL
Intela engu- $ 0.075 ngemililitha kuyo yonke i-e-liquid, noma ngaphandle kwe-nicotine
Intela engu- $ 0.05 nge-milliliter ku-e-liquid kumikhiqizo evaliwe (ama-pods, ama-cartridges, ama-cigalikes) kuphela — i-nicotine noma ingenayo
Intela engu-15% wholesale kuyo yonke imikhiqizo yomhwamuko
Izintela ze-Vape emhlabeni jikelele
Njengase-United States, izishayamthetho emhlabeni wonke aziqondi kahle imikhiqizo yomhwamuko okwamanje. Imikhiqizo emisha ibonakala kubenzi bomthetho njengosongo emalini yentela kagwayi (okuyiyona ngempela), ngakho-ke umfutho uma kuvame ukubeka intela ephakeme nethemba lokuhle.
Izintela zomhlaba wonke
Ama-leke ayi-10 (ama-dollar ayi-0,091 e-US) ngentela ngayinye yamamililitha ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Ama-manats angama-20 ($ 11.60 US) ngentela yelitha (cishe u- $ 0.01 ngemililitha ngayinye) kuwo wonke ama-e-liquid
Intela ingu-100% wentengo yangaphambi kwentela ku-e-liquid equkethe i-nicotine. Lokho kulingana nama-50% wentengo yokuthengisa. Inhloso yentela ayikacaci, ngoba imimoya kuthiwa ivinjelwe ezweni
Yize iCroatia inentela ye-e-liquid ezincwadini, okwamanje isethwe ku-zero
I- € 0.12 ($ 0.14 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuyo yonke i-e-liquid
Iphalamende laseDenmark selidlulise i-DKK 2.00 ($ 0.30 US) ngentela ngayinye yamamililitha, ezoqala ukusebenza ngo-2022. Abameli bokunciphisa nokulimaza basebenzela ukuguqula umthetho
NgoJuni 2020, i-Estonia yamisa intela yayo kuma-e-liquids iminyaka emibili. Izwe phambilini lalibeke intela engu- € 0.20 ($ 0.23 US) ngemililitha ngalinye kuyo yonke i-e-liquid
I- € 0.30 ($ 0.34 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuwo wonke ama-e-liquid
I- € 0.10 ($ 0.11 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-HUF 20 ($ 0.07 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuwo wonke ama-e-liquid
Intela yase-Indonesia ingu-57% wentengo yokuthengisa, futhi kubonakala sengathi yenzelwe kuphela i-nicotine equkethe i-e-liquid ("okukhishwayo kanye nalokho okushiwo kugwayi" yigama). Izikhulu zezwe zibonakala zithanda ukuthi izakhamizi ziqhubeke zibheme
Ngemuva kweminyaka yokujezisa abathengi ngentela eyenza ukwenyuka okuphindwe kabili kunokubhema, iphalamende lase-Italy livume inani elisha, eliphansi lentela ku-e-liquid ngasekupheleni kuka-2018. Intela entsha ingaphansi kuka-80-90% kunaleyo yokuqala. Intela manje ibalelwa ku- € 0.08 ($ 0.09 US) ngemililitha ngayinye ye-nicotine equkethe i-e-liquid, kanye ne- € 0.04 ($ 0.05 US) yemikhiqizo ye-zero-nicotine. Kumapayipi ase-Italy akhetha ukwenza i-e-liquid yawo, i-PG, i-VG, kanye nama-flavouring akhokhiswa intela
Amadivayisi ne-nicotine equkethe i-e-liquid akhokhiswa intela ngezinga lama-200% we-CIF (izindleko, umshuwalense kanye nempahla)
Yize iKazakhstan inentela ye-e-liquid ezincwadini, okwamanje isethwe ku-zero
Intela yaseKenya, eyaqala ukusetshenziswa ngo-2015, ingu-3,000 ama-Kenyan dollars ($ 29.95 US) kumadivayisi, nama-2,000 ($ 19.97 US) kuma-refill. Izintela zenza ukuqhuma kubize kakhulu kunokubhema (intela kagwayi ingu- $ 0.50 ngephakethe ngalinye) - futhi mhlawumbe yizintela eziphakeme kakhulu ze-vape emhlabeni
I-1 Kyrgyzstani Som ($ 0.014 US) ngentela ngayinye yemililitha ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Intela engajwayelekile yaseLatvia isebenzisa izisekelo ezimbili ukubala imali ekhishwa ku-e-liquid: kune- € 0.01 ($ 0.01 US) ngentela ngayinye yamamililitha, nentela eyengeziwe (€ 0.005 nge-milligram) esisindweni se-nicotine esetshenzisiwe
I- € 0.90 ($ 1.02 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-0.2 Macedonian Denar ($ 0.0036 US) ngentela ngayinye yamamililitha ku-e-liquid. Umthetho uqukethe ukuvumela ukwenyuka okuzenzakalelayo kwezinga lentela ngoJulayi 1 unyaka ngamunye kusuka ku-2020 kuya ku-2023
I-10 Philippines pesos ($ 0.20 US) ngamamililitha ayi-10 (noma ingxenyenamba ye-10 mL) yentela ku-e-liquid equkethe i-nicotine (kufaka phakathi nemikhiqizo ekhethiwe). Ngamanye amagama, noma yiliphi ivolumu elingaphezu kwe-10 mL kepha lingaphansi kuka-20 mL (ngokwesibonelo, i-11 mL noma i-19 mL) ikhokhiswa ngesilinganiso se-20 mL, nokunye
I-0.50 PLN ($ 0.13 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuwo wonke ama-e-liquid
I- € 0.30 ($ 0.34 US) ngentela ngayinye yamamililitha ku-e-liquid equkethe i-nicotine
I-0.52 eRomania Leu ($ 0.12 US) ngentela ngayinye yamamililitha ku-e-liquid equkethe i-nicotine. Kukhona indlela intela engalungiswa ngayo minyaka yonke ngokususelwa ekukhuphukeni kwentengo yabathengi
Imikhiqizo elahlwayo (njengama-cigalikes) ikhokhiswa intela kuma-ruble angama-50 ($ 0.81 US) iyunithi ngayinye. I-e-liquid equkethe iNicotine ikhokhiswa intela kuma-ruble ayi-13 $ 0.21 US) ngemililitha ngayinye
Intela ingu-100% wentengo yangaphambi kwentela kuma-e-liquid nakumadivayisi. Lokho kulingana nama-50% wentengo yokuthengisa.
I-4.32 Serbian Dinar ($ 0.41 US) ngentela ngayinye yamamililitha kuwo wonke ama-e-liquid
I- € 0.18 ($ 0.20 US) ngentela ngayinye yamamililitha ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Izwe lokuqala ukukhokhisa intela ye-vape kazwelonke yiRiphabhlikhi yaseKorea (i-ROK, evame ukubizwa ngeNingizimu Korea eNtshonalanga) -ku-2011, ngawo lowo nyaka iMinnesota yaqala ukukhokhisa i-e-liquid. Njengamanje izwe linezintela ezine ezihlukene ku-e-liquid, ngayinye ebekelwe injongo ethile yokusebenzisa imali (Isikhwama Sikazwelonke Sokukhuthaza Impilo sinye). (Lokhu kufana ne-United States, lapho intela kagwayi kahulumeni ekuqaleni yayimiselwe ukukhokhela uHlelo Lomshwalense Wezempilo Wezingane). Izintela ezahlukahlukene zase-South Korea ze-e-liquid zengeza ku-1,799 won ($ 1.60 US) we-milliliter, futhi kukhona nentela yemfucuza kuma-cartridges alahlwayo nama-pods we-24.2 won ($ 0.02 US) kuma-cartridges ayi-20
Intela engu-2 krona ngemililitha ($ 0.22 US) yentela ku-e-liquid equkethe i-nicotine
Ugwayi Wokushisa, I-Epen, Ukubhema Okuhlukile, Ugwayi waseNewport E, I-E Cigarette Blister Pack, Ugwayi we-E Liquid Vapor,